Accueil > Gazetin'ny nosy > Mama Sôsy : Hitory an’i La Gazette de la grande Ile
Tokony hametram-pialana amin’ny governemanta i Lalatiana Rakotondrazafy, minisitra Mama Sôsy raha ny raharaha nitranga teto Antananarivo, izay nitifiran’ingahy Andry Andriatongarivo vadin’ity minisitra ity an’ i Sayda mpanakanto malaza ankehitriny. Ny loharanom-baovao no milaza fa nisakaiza tamin’ity minisitra ity io mpanakanto io ka tsy nahatanty izany ity vadiny ka nitifitra azy tamin’ny «kalachnikov» teny Ambatobe. Araka ny voalaza tato amin’ity gazety ity ny alarobia sy alakamisy faha -8 sy faha-9 septambra 2021 teo ny zavatra nitranga tamin’izany fotoana izany na tamin’ny teny Malagasy na ny teny frantsay izany.
Raha ny zavamisy tamin’ny voalohan’ny herinandro izay mikasika ny fijangajangana nataon’ny mpikambana ao anatin’ny governemanta toa izao dia efa tsy lany henatra intsony ity minisitra Mama Sôsy ity. Tsy ny la gazette irery ihany anie no namoaka ny vaovao mahakasika iny raharaha iny fa hatramin’ny gazety hafa koa ary ny tambazotra tserasera isan-karazany.
Eo anatrehan’ny famoahana izany vaovao izany dia hitory ny La Gazette de la Grande Ile Ity minisitra Mama Sôsy ity raha ny valan-dresaka natao tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena tetsy Anosy omaly alakamisy 09 septambra 2021 izay nataon’ny mpisolovava azy.
Dia miandry izay ho tohin’ity raharaha ity indray izany isika manomboka izao. Tsy io fitoriana io ihany satria fantatra koa fa samy nitory tany amin’ny mpitandro ny filaminana avokoa na i Minisitra Mama Sôsy nohon’ny herisetra izay nataon’ny vadiny azy Andry Andriatongarivo(ity raharaha ity dia heloka bevava) izay tsy maintsy andraisana andraikitra avy hatrany satria tafiditra amin’ilay antsoina hoe VBG(Violence basée sur le genre). Faharoa dia nitory an’i Mama sôsy koa Andria-
tongarivo vadiny noho ny fijangajangana nataon’ny vadiny. Fahatelo dia nitory ingahy Sayda nohon’ny fitofirana azy sy ny fikasana hamono hahafaty azy nataon’ingahy Andry Andria-
tongarivo. Dia ho hitantsika ny tohin’ity raharaha ity manomboka izao indray. Efa ela i Mama Sôsy sy Sayda ireo no voalaza fa niaraka nefa vao izao vao nahatsikaritra izany ilay vendrana.
Ireo rehetra ireo dia vaovao tokony ho fantatrin’ny vahoaka avokoa ary tsy tafiditra ao anatin’ny fiainana manokana intsony izanyka harahina indray eto amin’ny firenena manomboka izao.